काँग्रेसको प्र श्न : पैदल गाउँ गइर`हेका श्रमि`कको यो देशमा सरकार छ कि छैन ? – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Thoughts/काँग्रेसको प्र श्न : पैदल गाउँ गइर`हेका श्रमि`कको यो देशमा सरकार छ कि छैन ?
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले लकडाउनबाट उत्पन्न समस्याका कारण पैदल गाउँ गइरहेका श्रमिकको यो देशमा सरकार छ कि छैन भन्दै प्र श्न गरेको छ। शुक्रबार विहानी काँग्रेस प्रवक्र्ता वि श्व प्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गरी कोरानाले बच्ने, भोकले मर्ने भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले देशबासीको नाममा गरिको सम्बोधन प्रति कटा क्ष गर्दै उलले भने, ‘नि श्च यनै भावनामा बगेर बोल्ने बेला यो होइन । तर कोठाभित्र छट्पटिएर र सडकमा तड्पिएर नागरिकको मृ`त्यु भएको दृश्य मौनतापूर्वक प्रतीक्षा गर्ने समय पनि यो होइन ।’आर्थिक रुपले लामो समय टिक्न सक्ने स्थिति नभएर सयौं किलोमिटर पैदल हिंडेर नागरिक घर गइरहेको शर्माले बताए ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ , ‘यस्तै प्रतिकूलतामा नागरिकलाई रा ज्यको भर थेग चाहिने हो । ७ दिनको लक डाउन लम्बिएर महिना दिन पुग्न लाग्यो । पर्याप्त राहत पु¥याउन या अप्ठ्यारोमा रहेकाहरुलाई सुरक्षित ढंगले गाउँ पु-याउने प्रबन्ध मिलाउन नेपाली कांग्रेस नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गर्दछ ।’गाउँमा रहेका नागरिकको स्थिति पनि कष्टकर बन्दै गएको काँग्रेसको ठहर छ ।
सरकारले जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिताको गति बढाउन नसक्ने हो भने मुलुकमा भयावह स्थिति उत्प`न्न हुन लागेको काँग्रेसको चेतावनी छ ।
विज्ञ`प्तिमा भनिएको छ, ‘अघिल्तिरको स्थिति देखिन्छ भने देख्नु प-यो सरकार । सुनिन्छ भने सु`न्नु प-यो । बुझिन्छ भने बुझ्नु प¥यो । गम्भीर परिस्थितिको गहिरो समिक्षा गर्दै उच्च ब्यवहार कुशलता साथ सरकारले कार्य गरोस्, सं`कटमा साथ रहेको प्रतिपक्षी दल सरकारलाई सचेत गराउँदछ ।’